हिरासतभित्र के गरिरहेका छन् रविले ? - Birgunj Sanjalहिरासतभित्र के गरिरहेका छन् रविले ? - Birgunj Sanjalहिरासतभित्र के गरिरहेका छन् रविले ? - Birgunj Sanjal
हिरासतभित्र के गरिरहेका छन् रविले ?
५ भाद्र २०७६, बिहीबार ०२:०५
काठमाडौं : चितवन प्रहरीले पत्रकार शालिकराम आत्महत्या प्रकरणका आरोपी रवि लामिछानेका समर्थकविरुद्ध अभद्र दुर्व्यवहार अन्तर्गत मुद्दा चलाएको छ । रविको रिहाइका लागि भएकोे प्रदर्शनमा खराब आचरण र व्यवहार देखाएको भन्दै चितवन प्रहरीले अहिलेसम्म २२ जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको हो ।
सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमका सञ्चालक रवि लामिछाने साउन ३० गते देखि चितवन प्रहरीको हिरासतमा छन् । हिरासतभित्र रवि के गरिरहेका छन् भन्ने धेरैको चासोको विषय हुन सक्छ । रवि आराम गर्नुका साथै पढ्ने र खेल्ने गर्छन् । भेटघाटबाहेकका समयमा रवि हिरासतमै रहेका अन्य थुनुवासँग समय बिताइरहेका छन् । बयान लिन थालेपछि छुट्टाछुट्टै बसेका रवि र युवराज बयान सकिएपछि पुनः एउटै कोठामा बस्न थालेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार